Fivarotana ny Villa Elisabeth : Hitory eny amin’ny Bianco ny Fanjakana -
AccueilRaharaham-pirenenaFivarotana ny Villa Elisabeth : Hitory eny amin’ny Bianco ny Fanjakana
02/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy honohono intsony fa tena misy. Nisy namarotra tokoa ny tany sy tranom-panjakana, ny Villa Elisabeth, izay nitoerana sy nipetrahan’ny Filoha teo aloha Zafy Albert sy ny vady aman-janany eny Ivandry. Tamin’ny Fitondrana Tetezamita no nitrangan’ny fifanarahana ny fifampivarotana tamin’ny orinasa Madaterrain, ny 24 janoary 2014. Ny 21 novambra 2016 indray kosa no nanatanterahan’izy ireo ny firaketana izany teny anivon’ny sampandraharahan’ny Fananan-tany.
Araka izany sy araka ny baiko nomen’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ny tsy maintsy nanatanterahana fanadihadiana lalina mahakasika io fifampivarotana ny tany misy ny Villa Elisabeth io.
Noho izany, nitondra fanazavana ny teo anivon’ny minisitera roa tonta, ny teo anivon’ny minisitera eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny Tany , ary ny Fampitaovana (M2PATE) sy ny minisiteran’ny Vola sy ny Tetibola (MFB), izay voakasik’ity fananam-panjakana nisy namarotra ity, ny talata 31 oktobra teo. Nilaza ny minisitry ny M2PATE, Benjamina Ramanantsoa, fa vao haingana no nahalala ny fisian’ny fifamarotana io tany sy tranom-panjakana eny Ivandry io. Ho an’ny minisitry ny MFB, Vonintsalama Andriambololona, nilaza ny tsy nahalala ny mikasika io fifamarotana io ny tenany. “Raha namidy ilay tany misy ny toeram-ponenan’ireo Filoha teo aloha ireo, tokony ho nampahafantarina ny teo anivon’ny MFB satria ny MFB no mikarakara ireny toeram-ponenam-panjakana natokana ho an’ireo Filoham-pirenena am-perinasa na tsia, sy ireo minisitra sy mpikambana eo anivon’ny governemanta ireny”, hoy ny minisitry ny MFB.
Araka izany, nandray fanapahan-kevitra ny Fanjakana amin’ny alalan’ny minisitera roa tonta amin’ny fametrahana fitoriana eny anivon’ny Bianco.
Izany hoe, raha ny fanazavana hatrany, dia hatolotr’ireo minisitera roa tonta eny amin’ny Bianco ny fanadihadiana rehetra vitan’izy ireo sy ny pitsopitsony mahakasika ny fifampivarotana. Noho izay indrindra, ny Bianco indray no manohy ny fanadihadiana rehetra hivoahan’ny marina sy ireo rehetra tompon’antoka tamin’ity fifampivarotana tany sy tranom-panjakana, izay tafiditra ao amin’ny tany Saint Antoine IV ity.
Ankoatra izay, fepetra faharoa ankoatra ny fitoriana eny anivon’ny Bianco, nandray fanapahan-kevitra tamin’ny alalan’ny famoahana didim-pitondrana iraisan’ireo minisitera amin’ny fanafoanana ny fifampivarotana sy ny firaketana ny M2PATE sy ny MFB. Noho izay indrindra, nambaran’ny minisitra roa tonta fa mihatra avy hatrany io didim-pitondrana io, ary mamerina amin’ny Fanjakana ny tany sy ny fananany izay nisy namarotra.